घेरा र अपेक्षामा प्रचण्ड
कहावतलाई मान्ने हो भने मणी सर्पहरुबाट घेरिएको हुन्छ ”, यदि यसै हो भने एक जब्बर घेरा प्रचण्डको वरीपरी छ । जस्ले प्रचण्डको रक्षा गरेको होला तर उनीलाई समृद्ध गर्न सकेको छैन ।खुकुलो घेराले नै प्रचण्डको रक्षा र समृद्ध दुवै गर्न सक्छ । आगो ताप्नु मुढाको , कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने भाव अनुभवकै आधारमा ज्ञान […]
ऋषिपञ्चमीमा पाप पखाल्ने भन्या हो र ?
-दिपक खनाल- १. ब्रत बस्ने प्रारम्भ त पार्वतीले नै गरेकी हुन् नि । उनलाई महादेव मनपथ्र्यो रे । बाआमाले विष्णुसित बिहे गरिदिन खोजेछन् । अनि संगीहरूले जंगलमा लगेर अनसन बस्न लगाएछन् उनलाई । आफूलाई मनपरेको भन्दा फरक मान्छेसँग बिहे गरिदिन खोजेकाले पार्वतीले बाआमाको निर्णयको विरोधमा अनसन बसेकी होलिन् सायद । अहिले पनि मन नपरेको […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,एक्सक्लुसिभ समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
ओलीको राष्ट्रवाद थाइल्याण्डमा उदांगीयो, रअ प्रमूखसँग गरे ओलीले भेट
एमालेका अध्यक्ष एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि स्वास्थ्य उपचार गर्न भन्दै थाइल्याण्ड पुगेका छन् । उनले नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको परिचय बनाएका थिए । तर जव ओली थाइल्याण्ड पुगे त्यसपछि उनले भन्ने गरेको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उत्रिएको छ र उनले कस्तो राष्ट्रवादको वकालत गर्ने रहेछन् र किन राष्ट्रवादको कुरा गर्दारहेछन् भन्न्े स्पष्ट भएको […]
एकमाफीनामा पत्र, कमरेड खिलाकाे नाममा
पृय कमरेड खिलाजी, अभिवादन् । मेरो फेसबुकमा कहिलै उपस्थित नहुने र हामीलाई मान्छे नगन्ने नरेन्द्रजङ पिटरले आज मेरा साथीका कमेन्टमा ईतिहास बिर्सौ भन्दै किन कमेन्ट गर्नु । नेपालगंजतिरको ईतिहास चाहिँ विर्से भईहाल्यो नि । झोकै चलेछ हौ, साथीलाई । तपाईको हिजोको फेसबुक लेखाईले म झसंग पो भँइ हो, कमेरड । आफन्तलाई नगन्ने कस्तो निर्मोही […]
प्रचण्ड सरकारका आशालाग्दा यी कदम
मुुलखबर विश्लेषण । सरकार भन्ने वित्तिकै जनता र सुसासन जोडिन्छ । जनताले सुसासन प्राप्त गर्नु वा सुसासनको अनुभुति गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भने जनतालाई सुसासनको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी वा दायित्व हो । सुसासनको कसीमा राखेर हेर्दा वर्तमान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सफल देखिंदै गएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण […]
हरेक पल परीक्षा हो जिन्दगी
अमिक शेरचन । मानव इतिहास र प्राणीहरूको उत्पत्तिसँग जोडिएर जिन्दगीको परिभाषा खोज्नुपर्ने हुन्छ । जीवनलाई मान्छेले आफू बाँचुन्जेलसम्म आफ्नै निम्ति बाँच्ने भन्ने ढंगले भनेको देख्छु । एकथरीले आफू मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वालाई नै विश्व दृष्टिकोणका आधारमा सबै मानवको समानता र एकताबारे सोचेको देख्छु । कतिले जीवन भनेको बाँच्चुन्जेल रंंगमञ्च गर्ने, ऐस–आराम गर्ने, जति सकिन्छ लुट्ने, […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,पत्रपत्रीकाबाट Read More »
भाडाका सेना बनेर नेपालीले कहिलेसम्म रगत बगाईरहने ?
-हिरण्यलाल श्रेष्ठ- इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पराई युद्धमा गोर्खाली निरन्तर मारिने ठाउँ अफगानिस्तान भइरहेको देखिन्छ नेपाल र अफगानिस्तान प्राचीन सभ्यता भएका सार्कमा आबद्ध दुई मित्र देश हुन् । तर, इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पराई युद्धमा गोर्खाली निरन्तर मारिने ठाउँ अफगानिस्तान भइरहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम, ब्रिटिस–भारतका साथै पन्जाब केशरी रणजित सिंहको खाल्सा राज्यको लाहोरमा गोर्खालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती […]
गुन लगाउने जिम्मा माओवादीको मात्रै ! एमालेले गुन तिर्नु पर्दैन ?
–नहेन्द्र खड्का / नेपाली राजीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अधिकांस मानिसहरु भन्छन् – एमालेका मान्छे मात्रै होइन, यो पार्टी नै बैगुनी हो । सायद ठिकै भन्दा हुन् । ‘बैगुनीलाई गुनले मार्ने’ भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकपछि अर्को गुन लगाएको लगायै छन् तर तिनलाई प्रचण्डले जति गुन लगाए पनि पुग्दैन । तिनको लोभको र पापको भाँडो कत्ति पनि […]
अवसर र चुनौतिको पहाडमाथि प्रचण्ड यात्रा
संगीता खड्का । प्रचण्ड फेरी दोस्रो पटक सरकार प्रमुख बन्ने करिब करिब निश्चित नै छ । उनी प्रधानमन्त्री बन्ने अबसरका अगाडि उभिइरहदा उनी माथि फेरी पनि अवसर र चुनौतिका यति डरलाग्दा पहाड छन् कि त्यो पहाडको सफलतापूर्वक उचाईमा पुग्नु वाहेक उनी संग अर्को विकल्प नै छैन । राजनीतिक रंगमन्चमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सधै केन्द्रमा […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य,एक्सक्लुसिभ समाचार Read More »
एमाले र माओवादी, को धोकेवाज ?
सन्तोष पौडेल । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै अहिले राजनीतिक वृत्तमा र विशेष गरेर एमाले कित्ताबाट माओवादीले एमालेलाई धोका दियो भन्ने टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षका महासचिव इश्वर पोखरेल र संचारमन्त्री रहेका शेरधन राईले सार्वजनीक रुपमै माओवादीले धोका दियो भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,अन्तरवार्ता / बिचार मुख्य Read More »